Apple dia nijanona tsy nanao sonia ny iOS 13.6 taorian'ny famoahana ny iOS 13.6.1 | Vaovao IPhone
Apple dia nijanona tsy nanao sonia ny iOS 13.6 taorian'ny famoahana ny iOS 13.6.1
Tamin'ny 12 Aogositra dia namoaka ny iOS 13.6.1 i Apple izay amin'ny teôlôjia dia mety ilay fanavaozana farany ny kinova fahatelo ambin'ny folo an'ny iOSRaha mbola tsy misy bibikely vaovao hita amin'ity fanavaozana vaovao ity, toy ny nitranga tamin'ny iOS 13.6, ny fanavaozana dia niteraka olana maro samihafa izay namboarina tao amin'ny iOS 13.6.1.
iOS 13.6 nitondra antsika ny fanohanana ny fiasan'ny Car Keys sy ny Apple News, ho fanampin'ny fiasa hafa tsy dia mahaliana sy marefo. Herinandro aorian'ny famoahana ny iOS 13.6.1, nijanona nanasonia ny iOS 13.6 ireo mpizara Cupertino, noho izany tsy azo atao ny mihena raha ilaina.
Apple dia nijanona nanasonia ireo kinova teo aloha isan-kerinandro taorian'ny famoahana kinova vaovao, na dia indraindray aza, mamela sisiny 2 herinandro noho ny antony tsy fantatsika. Ny antony fanesorana ireo fanavaozana teo aloha dia izany ny mpampiasa dia havaozina hatrany amin'ny kinova farany misy, kinova miaro ny fahalemena mety ho voamarika tamin'ny kinova taloha.
iOS 13.6.1 manamboatra olana maro ao anatin'izany ny loko maitso an'ny efijery noho ny olan'ny fanaparitahana ny hafanana (Araka ny nambaran'i Apple tamin'ny fanamarihana fanavaozana). Namboarina ihany koa ny olana natolotry ny fitaovana sasany izay tsy mamafa izany ho azy ireo rakitra tsy ilaina amin'ny rafitra raha ambany ny fitahirizana. Bibikely iray hafa namboarina tamin'ity fanavaozana ity dia ilay iray izay nanala ny fampandrenesana fampidirana ho azy ho azy.
Ny beta developer farany misy ankehitriny dia ny laharana 5, beta izay tokony hanamboatra ilay fanjifana bateria avo asehon'ny beta fahefatra. Ny zava-baovao tafiditra ao amin'ny beta fahadimy an'ny iOS 14 mifantoka indray, amin'ny fampandrenesana fampahafantarana, efijery fandraisana vaovao ho an'ny fampiharana Shortcuts, widget iray ho an'ny Apple News ... Ity lahatsoratra ity Manana ny vaovao rehetra momba ny beta fahadimin'ny iOS 14 ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 13 » Apple dia nijanona tsy nanao sonia ny iOS 13.6 taorian'ny famoahana ny iOS 13.6.1
Ny tranofiara voalohany amin'ilay horonantsary On the Rocks nataon'i Sofia Coppola sy Bill Murray dia efa misy izao
Ny fananana sanda 2 tapitrisa tapitrisa dia tsy azon'ny rehetra lazaina